अर्थ/कृषी Archives - Page2of 28 - Saptakoshionline
कोकिला भण्डारी धनकुटा । महिला बहुउद्वेश्यि सहकारी संस्था पारिपात्ले को आयोजनामा ७ दिने अदुवा प्रोसोधन तथा अचार बनाउने तालिम सम्पन्न भएको छ ।धनकुटा नगरपालिकाको सहयोगमा सञ्चालन भएको तालिममा जिल्लाको स्थानिय स्तरमा उत्पादन हुने अदुवा ,अकबरे खुर्सानी ,गाँजर , मुला ,काक्रा ,सिम्ला ,आल्चा लगायतको प्रशोधन गरि अचार बनाउने सीप सीकाईएको अझ ब्यवसायिक बन्न सहज हुने सहभागिले बताए । तालिम पश्चात सीप सिकि उत्प...
शनिबार, आषाढ १४, २०७६
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ६५ हजार ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । यो भाउ सोमबारको तुलनामा ५ सय रुपैयाँले बढी हो । सुन व्यवसायीका अनुसार यो अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य पनि हो । यसअघि गत शुक्रबार सुनको भाउ १ हजार रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ६५ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । अन्तराष्ट्रिय बजारमा भाउ चुलिएसँगै नेपाली बजारमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । यसअघि स्थानीय ब...
सरकारले नेपाली कामदारका गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको हो। कामदारको हितलाई ध्यान दिँदै सम्झौतामा प्राथमिकता दिइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ९ महिनायता यूएई, मौरिसस, जापान र मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको छ। श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारील...
सरकारले भारतीय तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण पास गरेपछि मात्रै आयात गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। गुणस्तरहीन बस्तुको आयात रोक्ने उद्देश्यले सरकारले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा भने चुनौति देखिएको छ। आवश्यक पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार नहुनाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो। पर्याप्त मात्रामा मेशिन र जनशक्ति नभएकाले नीति कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने वाणिज्य, आपूर्ति तथ...
कृषि अनुदानमा २० अर्ब वितरण, कार्यकर्ता मालामाल, कृषक चिल्लै !
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले यसबर्ष कृषक अनुदानमा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । कानुनी आधारविना नै कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले कृषक अनुदानका नाममा २० अर्ब रकम वितरण गरेको छ । बास्तविक किसानलाई भन्दा पार्टी कार्यकर्तालाई पोस्न २० अर्ब रकम वितरण गरिएको भन्दै आलोचना शु्रु भएको छ । कृषक अनुदान कार्यक्रमको कुनै कानुनी आधार छैन । तरपनि मन्त्रालयले आफु अनुकुल विधि निर्माण गरेर जथाभावी रकम वि...
महुलि लघुवित्तको आम्चोक शाखाले छैठौ वार्षिक उत्सव मनायाे
मदन अधिकारी भोजपुर / भोजपुरको आम्चोक गाउपालिका स्थित महुलि लघुवित्त वितिय वितिय संस्थाले आफ्नो छैठौ वार्षिक उत्तसव आफ्ना सदस्यहरु समक्ष मनाएको छ । समृद्ध नेपाल सूखि नेपाली नेपाल सरकारको मुल नारालाइ साकार बनाउने यश शाखाको मुल उदेश्य रहेकाले यश शाखाको मुख्य भगवान आफ्ना सदस्य भएको बताउदै सदस्यको गुनासो सुन्ने गरि यश संस्थाको छैठो स्थापना दिवसको अवसरमा यसै गाउपालिकाका बिभिन्ना प्रतिस्ठित व्यक...
लमजुङ्ग जिल्लाका अलैँची कृषकले अलैँची दाना बिक्रीबाट रु पाँच करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन् । लमजुङमा उत्पादित ७५० क्विन्टल अलैँची दाना बिक्रीबाट कृषकले रु पाँच करोड २५ लाख आम्दानी गरेका हुन् । गत वर्ष उत्पादित ६०० क्विन्टल अलैँची दाना बिक्रीबाट रु चार करोड ४८ लाख आम्दानी भएको थियो । गत वर्ष प्रतिकिलो रु ६०० देखि ८०० सम्म बिक्री भएको थियो । यस वर्ष प्रतिकिलो रु ६०० देखि ७५० सम्ममा अलैँची दाना ...
अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा १०० मेगावाट क्षमताको नीलगिरि खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण शुरु भएको छ। नीलगिरि हाइड्रोपावर कम्पनीले ३८ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि र ६२ मेगावाट क्षमताको नीलगिरि क्यासकेड बनाउनका लागि पूर्वाधार निर्माण शुरु गरेको हो। कम्पनीका प्रतिनिधि उपेन्द्र गौतमले नीलगिरि क्यासकेडको पहुँच मार्ग बनाइसकेको र नीलगिरिको पहुँचमार्ग निर्माण शुरु भएको जानकारी दिए। नारच्...
के तपाई रोजगारीको खोजीमा हुनुहुन्छ र पाइरहनु भएको छैन ? मंगलबारको कान्तिपुर दैनिकमा रोजगारीसम्बन्धी विभिन्न सूचना प्रकाशित भएको छ, जुन तपाईँको लागि पो अनुकूल हुन्छ कि ! सूचना हेर्नुहोस्ः
फूर्सद भए ‘ए हजुर’ घुमौँ नेपाल….. (फोटोफिचर)
सरकारले सन् २०२० लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको छ । पहिले–पहिले विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने होटल तथा होमस्टे यतिबेला नेपाली पर्यटकले भरिभराउ हुन थालेका छन् ।